Kuhle Umkhiqizi we-IP42 Electric LinearActuator nomkhiqizi | IHoodland
● Stroke Ubude: 50 ~ 500mm
Incazelo YomkhiqizoI-IP42 Series High Speed ​​Electric Linear Actuator, iyithuluzi lokushayela nelisebenzisa elingaguqula amandla kagesi abe ukunyakaza okubuyisanayo, elungele izinqubo ezahlukahlukene eziyinkimbinkimbi noma ezilula zobuchwepheshe. Uma kuqhathaniswa ne-hydraulic system pneumatic system, ama-actuator awadingi uhlelo oluyinkimbinkimbi, olungakhawulelwe yisimo sezulu noma imvelo, icwecwe futhi ingasindi, kulula ukuyifaka nokuyigcina, ingasetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, izimayini, amandla, amalahle, ezokuthutha, okusanhlamvu, amakhemikhali imboni, izinto zokwakha nokunye.
I-Powder metallurgy shell yenza impilo ye-actuator isebenze isikhathi eside kakhulu kunaleyo yepulasitiki; ngomsindo ophansi, ama-actuator ethu alayini angasetshenziswa ezimeni eziningi ezahlukahlukene; ngokushintshwa komkhawulo okwakhelwe ngaphakathi ohlangothini ngalunye, imoto kagesi izoma ngokuzenzekelayo ukusebenza lapho induku ye-telecopic ifinyelela phezulu noma ezansi ukuqinisekisa ukuphepha komsebenzisi; Ama-actuator angama kunoma yisiphi isikhundla osifunayo, futhi ngeke ahoxise noma ngabe kunomthwalo; i-rugging spur gearing, izinto zokugcoba zekhwalithi yezimboni kanye nama-motors wokusebenza aphezulu ahlangana ukuhlinzeka ngamandla amakhulu nenani lomsebenzisi wokugcina. Amayunithi ahlanganiswe futhi avalwe ukuze asetshenziswe ezinhlelweni zangaphandle zezimboni nezamaselula.
Ukushaywa unhlangothi okuvamile kusuka ku-50mm-950mm, futhi singakunikeza ngemikhiqizo eyenziwe ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, i-OEM ne-ODM ziyatholakala.
Futhi ngevolumu yokufaka ejwayelekile, ubude be-stroke kanye ne-no-load speed actuators, singahlala sibathumela nge-1-7days, isikhathi sokulethwa esinemininingwane sincike ebuningini bakho. Ngoku-oda ngobuningi noma ngemikhiqizo eyenziwe ngezifiso, sizokunikeza isikhathi esilinganisiwe sokulethwa bese sithumela izimpahla ngesikhathi.
Ukukhokha, samukela i-paypal, inyunyana yasentshonalanga, i-T / T njll.
Uma kukhona umbuzo mayelana nokufakwa ngaphakathi noma ukusebenzisa, vele uxhumane nathi ngokukhululeka, ukuthengisa kwethu nonjiniyela bahlala batholakala kuwe.
● Igobolondo le-Aluminium alloy, ukwelashwa kwe-oxidation
Olandelayo: IP60 Electric Linear Actuator
I-Dc 24v Linear Actuator, Isilinda Actuator, Electric Linear Actuator, I-Forage Abavuni Actuator, Double Acting eyisilinda Actuator, I-Low Noise Linear Actuator,